हामीले चीन कार्ड खेल्दा राजीव गान्धी आत्तिएर राजा विरेन्द्रसँग सम्पर्क गरे – YesKathmandu.com
शुक्रबार २२, असोज २०७२
नरबहादुर बुढाथोकी (पूर्वआपूर्तिमन्त्री)
अहिले अर्काे मौका आएको छ । हामी भारतको मात्र भर पर्नु हुँदैन । चीनसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । तर चीनले अहिले ७५ प्रतिसत इन्धन किन्नु पर्ने सर्त राखेको कुरा सुनेको छु । त्यो भन्दा ५० प्रतिसत चीन र ५० प्रतिसत भारत लगाएत अन्य मुलुकबाट ल्याउने गरी सम्झौता गर्नु पर्दछ । (२०४५ सालमा नाकाबन्दी हुँदाका आपूर्तिमन्त्री)
राप्रपा नेपाल सरकारमा जाने तयारी
manab kasyap says:
good.ati uttam bichar ho.china saga samjhauta nagari dirghakalin samadhan hudaina.
नारायण प्रसाद दवाडी says:
देश लुट्नु यी पार्टीको रगतमा लेखिएको छ!
भारतको दास हुनु हुँदैन सत्यहो. समस्या हाम्रा अनेक छन्. धेरै विचार गरेर मात्र कदम चाल्नु पर्छ. दुरगामी निर्णय त लिनुनै पर्छ. २०४५ भन्दा आजको परिवेश झनै जटिल बनेको छ. तेस बखत एका तर्फ नाका बन्दि थियो अर्को प्रच्जातान्त्रका लागि आन्दोलन. एता प्रजातन्त्र आयो उता राजीव गान्धीको सकार ढल्यो. विश्वनाथ प्रतापले नाका खोलि दिए. प्रश्न एउटी छ नेपालले दुरगामी दृष्टिकोण किन राख्न सक्दैन. किन ६ महिना १ वर्षका लागि संचय गर्ने योजना बनाउदैना. किन हामि भारत परास्त नै हुनु पर्यो ? डर धेरै छन्. चीन संग सम्बन्ध गास्न पनि तेती सजिलो छैन.
हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव संविधानसभाबाट अस्वीकृत, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै बन्यो
कावुल घटनाको प्रतिवेदन बुझने यो कुन काइदा हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?